“အတွေးစလေးတွေ”: သူကြီးသား ပေါက်ကြီး၏ စွန့်စားခန်းများ ( ၁ ) . . .
တော်ပါသေးရဲ့ဗျာ... သူကြီးသား ပေါက်ကြီး ဆိုတဲ့ စကားလုံး မြင်လိုက်ချင်း ဆရာဟန်ကြည်တစ်ယောက် သူကြီးမင်း အတွင်းရေးတွေသိပြီး ဖွင့်ချတော့မယ် ထင်နေတာ။ ဖတ်ပြီးမှဘဲ ဂလု ကနဲ အပူလုံးကြီး ကျသွားပါရောလား။ တော်သေးတာပေါ့ တစ်ခြားသူကြီးသား ပေါက်ကြီး ဖြစ်နေလို့။း)
အစမှ အဆုံး တပြုံးပြုံး ဖတ်နေမိတယ်။ သူကြီးမင်းတို့ဆီလဲ အော်ဂင်နာရီ အသံကို စကြားဖူးတာ တစ်ခြားရွာက ဘုန်းကြီးကျောင်းကပါဘဲ။ လော်စပီကာကြီးနဲ့ ဂျွိုင်းထားတာလေ။ ကိုးနာရီထိုးတဲ့ တီးလုံးလေးဆို ကြိုက်မှ ကြိုက်ရယ်။ ဘုမသိဘမသိ စစချင်းကြားရတဲ့ ညကဆို အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်လေ။ ညပိုင်းမှ စ အသုံးပြုတယ်ထင်ပါရဲ့။ သံစုံတီးလုံးလေးကို အိပ်ပျော်နေရင်း ကြားရာကနေ အိပ်မက်ထမက်ပါရောလား။ ဇာတ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲ သွားကြည့်နေရတယ်လို့လေ။ ဖြစ်ပုံပြောပါတယ်။ ဟား ဟား ဟား။
ဒုတိယပိုင်းကို မြန်မြန်ဆက် ဆရာရေ။ စောင့်နေမယ်။
စာရေးတာ သွက်လက်တော့ ဖတ်လို့ ပိုကောင်းတယ်။
သူကြီးမင်းက အပူမရှာချင်လို့ ဂလိုလေး လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေနေတာနော် ဆရာ။ မစွမ်းနိုင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ငှက်ပြောတုန်းဆောင်ထားတာက မုန့်ဟင်းခါး ချက်ဖို့ပါ။း)
'သူကြီးသား' ဆိုကထဲက တဂျီးမင်း ဘယ်နည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိပြီးသား :P
ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ အတွေးလေးတွေမှန်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်မှာမနေပဲ ရွာဦးကျောင်းမှာ နေခဲ့လို့ မဒမ်နဲ့ရေစက်ပါတယ်လို့ ဆိုရမယ် နို့မို့ဆိုလွယ်ဘူးး)
27 June 2012 at 07:00
သူကြီးသားဆိုတာလေးဖတ်ပြီး (သူကြီးသမီး) မိလွမ်း အတွက်ပါ ရေးပေးပါဦး။ အားပေးသွားတယ် ဆရာ။
ဖတ်လို့ကောင်းလို့..့ .. ဖတ်ချင်လှပြီ ဒုတိယပိုင်း..
ဆရာဝတ္ထုရှည်တွေ ဘာတွေ အားရင်ရေးပါလား... ဆရာရေးရင် တအားဖတ်ကောင်းမှာ..း))
အကိုရဲ့ စာလေးဖတ်ပြိး သူကြိးမင်းကွန်မန့်ကျမှ ဝါးခနဲ ဝလုံးကွဲ ရယ်မိတယ်... ငှက်ပျော်တုံးစိုက်ထားတာ မုန့်ဟင်းခါး ချက်ဖို့ပါတဲ့...:P:P မှတ်ထားမှ သူများတွေ ပြန်ပြောလို့ ရအောင်..:):)
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ ဆရာရေ။ဖတ်ရင်းတစ်ပုဒ်လုံးပြီးသွားတယ် အပြုံးကမပြီးသေးဘူး တွေးတွေးပြီးသဘောကျနေတာ ဒုတိယပိုင်းလေးလဲ မျှော်နေပါတယ်။
အာာာ သဂျီးတိုတိုမှောင်ကိုစောင်းတွယ်ပြီး ရေးသွားလိုက် တာ ငယ်ငယ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတပ်တဲ့ အော်ဂင်နာရီနဲ့ လော်စပီကာကြီးအသံကြားယောင်မိတယ် ဆြာ
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကလည်း ခေတ်စားခဲ့ပါရောလား ရန်ကုန်မှာ သယ်ကြီးသားဘယ်သို့ဘယ်ပုံဆိုတာ စောင့်မျှော်နေမယ်ဗျားး)
ဆရာ့ရဲ့ ဒီပိုစ်ကို ဖတ်မှပဲ တောစရိုက်၊ တောဓလေ့တွေကို မျက်စိထဲ အထင်းသား မြင်ယောင်နေမိပြန်တယ်။ ဘုန်းဘုန်းတို့ရွာနဲ့ ဟိုပုံးမြို့နဲ့က မိုင်နှစ်ဆယ်ခန့် ဝေးပါတယ်။ အဖေတို့က ဟိုပုံးမြို့ကိုသွားပြီး လယ်သွားလုပ်တာကိုး။ အဲဒါနဲ့ "သားလည်းလိုက်ချင်တယ်"ဆိုပြီး ပူဆာတော့ အဖေက "သားရယ် မသွားချင်ပါနဲ့အုံး၊ သားကြီးလာရင် မသွားချင်လည်း သွားကို သွားရမှာပါ"တဲ့။ ဆရာပြောမှပဲ ရွာဦးကျောင်းက အော်ဂင်နာရီသံကြီးကို ပြန်ကြားယောင်နေမိသလိုပဲ။
အော်ဂင်နာရီ အဝယ်သွားတဲ့ သူဂျီးသား
ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံ ကြုံရမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါလား ဆရာဟန်..
တောဓလေ့နဲ့ ထုံမွန်းပြီးရေးထားတော့လည်း တောကို လွမ်းရပါသရှင်..
တောစရိုက် . . . တောဓလေ့လေးတွေ
ဖတ်ရတာ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးပဲ
စာက သွက်တော့ အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတယ်
ဆက်လာဦးမယ့် စီးရီးစ်တွေလည်း စောင့်နေလျက်
တဂျီးမင်း ကဗျာတွေကြီးပဲ လှမ့်ရေးနေလို့ ဆရာဟန် ကလိပြီ ထင်နေတာ.. အော်ဂင် နာရီကြီးတွေ့တော့မှ ပြုံးပြုံး၊ ပြုံးပြုံး ဖြစ်သွားတော့တယ်... အပိုင်း ၂ မျှော်နေမယ်နော်.. ဆရာ..
ငှက်ပျောတုန်းတွေက မျက်စောင်းထိုးနေပြီး)။
အပီအပြင်ကို ရေးတာပါလား ဆရာ..
ဟုတ်ပါ့ ကျွန်တော့်တို့ရွာမှာလည်း သို့ကလိုပါဘဲဗျာ
ရောက်ခါစ ဆိုတော့ အထူးအဆန်းကြီးဖြစ်နေရသကိုး
နောက်တစ်ပိုင်းကို စောင့်နေလျှက်ပါ ဆရာ။
ငယ်ငယ်တုန်းက ထန်းတပင်ရွာကို လိုက်လည်ဖူးတယ် ဆရာ။ မိုးအုံမျက်မှန်တပ်တာကို အထူးအဆန်း ၀ိုင်းကြည့်ကြတာ အမှတ်ရတယ်။ ဒါတောင် ရန်ကုန်နဲ့ဘာမှ ဝေးတာမဟုတ်ဘူးရယ်။
ဟီး... အဲ့သည်ရွာက အပျိုတွေလဲ အဲ့လိုပဲဗျ။ မထင်ရင် ထဆဲတာ..... ရင်ခုန်ခဲ့ဘူး။
အပိုင်း ၂ မျှော်နေပါမယ် ဆရာရေ။
အရေးအသားက ဂွတ်သဗျား..အပိုင်း၂ သွားဖတ်လိုက်ဦးမယ်...
သွားတွေ အအေးပတ်ပြီး ပါးတွေပါ ရွဲ့ကုန်မှာ စိုးရတယ်.. ရယ်ရချက်ကတော့...ဟီးးးးးးးး